तालिबानको नाम लिदैं इलन मस्कले गरेको ट्वीट विश्वभर बन्यो भाइरल, त्यस्तो लेखे ? (हेर्नुस् ट्वीटसहित) — Imandarmedia.com
तालिबानको नाम लिदैं इलन मस्कले गरेको ट्वीट विश्वभर बन्यो भाइरल, त्यस्तो लेखे ? (हेर्नुस् ट्वीटसहित)
एजेन्सी। विश्वका सबैभन्दा बढी धनाढ्यमध्येका एक खर्बपति इलोन मस्कले अफगानिस्तानका तालिबानको विषयमा एक ट्विट गरेका छन्, जुन विश्वभर निकै भाइरल भइरहेको छ।
अमेरिकी मस्कले तालिबान लडाकुको एक सामूहिक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,‘हे भगवान, एक जनाले पनि मास्क लगाएका छैनन्।’ उनले ट्विटमा कोरोनाको डेल्टा भेरियन्टबारे उनीहरुलाई जानकारी छ या छैन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।
तालिवान झनै उग्र, भारतमाथी हमला गर्न थालेपछि मोदी तनावमा
हालै देश कब्जा गरेको तालिबानले अफगानिस्तानस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासमा छिरेर बुधबार छापा मारेको छ।भारतको अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार हाल बन्द कन्धार र हेरातमा रहेका भारतीय दूतावासको कार्यालयको ताला तोडी तालिबानी लडाकु प्रवेश गरेका हुन्। त्यस क्रममा उनीहरूले कन्धारस्थित भारतीय दूतावासको दस्तावेज खोज्दै दराज खोले भने दुवै दूतावासका कार्यालय परिसरमा राखिएका गाडी लिएर गएका छन्।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारको गुप्तचर एजेन्सी एनडीएसका लागि काम गर्ने अफगानी नागरिक खोजीका लागि तालिबानी लडाकु घरघर पुगेका छन्। जलालाबाद र काबुलस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासमा के भइरहेको छ, त्यसको जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन।
रिपोर्टअनुसार हक्कानी नेटवर्कका झन्डै ६० हजार लडाकुले राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएका छन्। जसको नेतृत्व अनस हक्कानीले गरिरहेका छन्। उनी हक्कानी समूहका प्रमुख सिराजुद्दिन हक्कानीका भाइ हुन्। अनस हक्कानीले अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हामिद कारजाई र एचसीएनआरका प्रमुख अब्दुल्लाह अब्दुल्लासँग भेटेका छन्। यसबाट पनि कारजाई र अब्दुल्लाका गतिविधि तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
यसै गरि , आइतबार तालिवानले काबुलमाथि कब्जा जमाएपछि त्यसको स्वागत विभिन्न इस्लामी संगठनहरूले गर्न थालेका छन्। अलकायदाको अरेबियन पेनिनसुलास्थित संगठनले तालिवानले अमेरिकी सेना र असरफ घानीलाई अफगानिस्तानबाट हटाएर काबुललाई नियन्त्रणमा लिएकोमा प्रशंसा गरेको छ। तालिवान साहसी सगंठन भएको समेत घोषणा गरेको छ ।
अलकायदासँग सम्बन्धित अन्य संगठनले पनि तालिवानको विजयलाई स्वागत गरेका छन्। सिरियाको हयात तहरिर अल–शाम र पश्चिमी चीनको तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टीले तालिवानलाई अफगानिस्थानमा ‘इस्लामिक राज्य’ कायम गरेकोमा बधाइ दिएका छन्। यसरी आतकंबादी संगठन सबै एक हुन थालेपछि यो बिश्वका लागी नै चुनौतिको मुद्धा बन्ने निशिचत छ ।शान्तिको माध्यमबाट यस्ता समस्याको निराकरण समयमा नै गर्नुपर्छ ।
अफगानि जनतालाई फन्दामा पार्न तालिवानहरुले शुरु गरे अनौठो धन्दा
अफगानि जनताको मन जित्न तालिवानहरुले धमाधम नयाँ कार्यको थालनी गरेका छन् । अफगानिस्तान कब्जा गरेसँगै तालिबानले आफूप्रतिको आम नागरिकको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय तालिबानले सामाजिक संजालमा सडक निर्माण गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ।
तालिबानले अरबी भाषाको ट्वीटरमा १९ अगस्तमा एक भिडियो साझा गर्दै एक सार्वजनिक घोषणा जारी गरेको छ। ट्वीटर पोष्टमा तालिबानले ‘लोक निर्माण मन्त्रालय’ले एक कम्पनीसँग जाबुल प्रान्तको कलात र मैदान वार्दक प्रान्तको मैदान शहरको बीच सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ।
ट्वीटमा कम्पनीको नाम ग्लो ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन लेखिएको छ। साथै, यो परियोजना तीन महिनामा पूरा गर्ने सम्झौता गरिएको जनाएको छ। यसको एक दिनअघि एक भिडियोमा कमेन्ट गर्दै तालिबानको ट्वीटर अकाउन्टले लोक निर्माण मन्त्रालयले देश भरका सडको पुनर्निर्माणका लागि दुई गुणा प्रयास गर्ने जनाएको थियो। यसमा कन्धार र हेरातबीच तीव्र गतिकासाथ सडक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ।
तालिबानले अफ्गानिस्तानको राजधानी काबुलमा १५ अगस्तका दिन कब्जा गरेको थियो। तर उसले अहिलेसम्म सरकारको घोषणा भने गरिसकेको छैन।